အရှိသဘာဝတရားကို သိစွမ်းနိုင်တဲ့ ပညာ။
သညာအဆင့်ပဲရှိသေးတယ်၊ အဲဒီအပေါ်မှာ အကောင်းအဆိုး ခွဲခြားသိတာမှ ပညာဖြစ်တယ်။
ကြီးပေ၏။ ထို့ကြောင့် ဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်အစစ် ဖြစ်စေလိုလျှင် ထိုတရားဟောမှုကြောင့် ရမည့်
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 10:27 PM No comments:
အတွင်း (၃၇) မင်း၊ အပြင် (၃၇) မင်း။
မြန်မာနိုင်ငံ အိမ်အချို့၌ နတ်ရုပ်များကို ထားကြ၏။ ပူဇော်ပသကြ၏။ သုတ်ပါထေယျ ပါဠိ
တော် အာဋာနာဋိယသုတ်တော်၌ နတ် (၃၇) ပါးကို ဖော်ပြ၏။ ယင်းကို အတွင်း (၃၇) မင်းဟု ခေါ်
ကြ၏။ သာသနာတွင်းဟု ယူရန် ရှိဟန်၏။ ယင်းတို့မှာ ၁။ ဣဌနတ်။ ၂။ သောမနတ်။ ၃။ ၀ရုဏနတ်
၄။ ဘာရဒွါဇနတ်။ ၅။ ပဇာပတိနတ်။ ၆။ စန္ဒနနတ်။ ၇။ ကာမသေဌနတ်။ ၈။ တိန္နုဃဏ္ဍုနတ်။
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 10:21 PM No comments:
ရှင်မဟာရဌသာရ (အင်းဝခေတ်) ။
ရှင်မဟာရဌသာရဟာ အင်းဝနေပြည်တော်မှာ မွေးဖွားပြီး နန်းတော်ထဲမှာ ကြီးပြင်းခဲ့
ရတဲ့ မင်းဆွေမင်းမျိုးတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ လူနာမည် ကိုမောင်မောက် လို့ခေါ်ပါတယ်။ ငယ်စဉ်
ကပင် ကဗျာပညာ ထူးချွန်ကျော်ကြားလှပါတယ်။
ထူးချွန်ပုံမှာ ..မောင်မောက် (၁၀) နှစ်သား အရွယ်တွင် အင်းဝဒုတိယမင်းခေါင်၏
၁ ။ သီလမရှိသေးတဲ့မိဘတွေကို သီလရှိလာအောင် အားကောင်းလာအောင်ပြုလုပ်ပေးရပါ
၂ ။ ဝိပဿနာပညာမရှိသေးတဲ့
၃ ။ ရတနာသုံးပါးအပေါ်သဒ္ဓါတရား
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 2:55 PM No comments:
လက် ငင်း အကျိုး ကျေးဇူးအ နေဖြင့် ငါးပါးသီလ ရဲ့ အကျိုးကိုအပြန်အလှန်အကျိုး ကျေးဇူး ရပါသည်။မိမိအသက်အသက်မခံ ရပဲအသက် ရှည် စွာ နေ ရခြင်း , ပစ္စည်း ဥစ္စာလုယက် ခိုးယူမခံ ရပဲပစ္စည်း ဥစ္စာတိုးပွားခြင်း ,မိမိသားသမီးသားမယားအားတစ်ပါးသူပြစ် မှားအနိုင် အထက်မပြုနိုင် ခြင်း ,သူတစ်ပါးလိမ် ညာလှည့်ဖြား ကောက် ကျစ် ယုတ်မာမှုမခံ ရခြင်း
သဲပုံစေတီပွဲ ဆင်နွှဲကြပုံအကြောင်းကို ဗုဒ္ဓစာပေမှ ပြန်ပြောင်းကြည့်ရလျှင် ဟိမဝန္တာအနီး ယမကတောင်၌ တပည့်အပေါင်း ၁ သောင်း ၄ ထောင် အခြံအရံရှိသည့် ပုလိနထူပိယ(သဲပုံစေတီပြုလုပ်ကိုးကွယ်ခဲ့သည့်) မထေရ်လောင်းလျာ နာရဒရသေ့ကြီးက အော်…တပည့်အပေါင်း ၁သောင်း၎ထောင်တို့မှာတော့ ငါတည်းဟူသော လေးစားကိုးကွယ်ရာ ဆရာရှိကြတယ်၊ ငါ့မှာတော့ ရိုသေလေးစားအားထားကိုးကွယ်ရာ ဆရာသမားကင်း၍ နေတယ်၊ ဤသို့ဆရာသမား
ဒီကနေ.ခေတ်မှာ ကမ္ဘာအနှံ. ကျယ်ကျယ်ပြန်.ပြန်. meditation ဆိုပြီးတော. သမထ အားထုတ်တဲ. အစဉ်အလာတွေဟာ နိုင်ငံတကာမှာလည်း လိုက်နာကျင်.သုံးနေကြတယ်။
ဟိုနိုင်ငံမှာလည်း meditation ၊ ဒီနိုင်ငံမှာလည်း meditation လို.ဆိုပြီးတော. meditation လုပ်ငန်းတွေဟာ ခုအခါမှာ popular ဖြစ်လာတယ်လို. ပြောရမယ်။
ပါချုပ်ဆရာတော်၏ ဘ၀မှ လွတ်မြောက်ဖို့နည်း။
ရောဂါ မပျောက်နိုင်ပါ။ ရောဂါပျောက်ချင်ရင် ဆေးကိုမှန်မှန် သောက်ရပါတယ်။ တရားဆို
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 10:56 PM No comments:
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 10:48 PM No comments:
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 10:37 PM No comments:
မြန်မာစာပေနယ်မြေမှာ ပေလေးပင်၊ ရှင်လေးပါးအဖြစ် ဂုဏ်ပြုခေါ်ဆိုခြင်း ခံရတဲ့ စာဆို
ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလေးဦး အင်းဝခေတ်မှာ ပေါ်ထွန်းခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီး လေးဦးကတော့ ရှင်ဥတ္တမ
ကျော်၊ ရှင်အုန်းညို၊ ရှင်ခေမာနဲ့ ရှင်မဟာသီလ၀ံသတို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။
အဲဒီ ရှင်လေးပါးထဲက ရှင်မဟာသီလ၀ံသဟာ ဂုဏ်ပြုထိုက်တဲ့ ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်ပါ
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 10:23 PM No comments:
၁။ မင်္ဂလသုတ် -
အ - မင်္ဂလာတွေ ၊ဒု - မင်္ဂလာ တွေကို ဘ၀မှာ မဖြစ်စေဖို့ သု-မင်္ဂလာတွေပဲ ဖြစ်စေဖို့
မင်္ဂလသုတ်ကိုရွတ်ကြရတယ် လို့ဆိုပါတယ်။ မင်္ဂလသုတ် ဟာ ဘ၀နေနည်းပါပဲ ။ ကျွန်တော်သဘောကတော့
ရွတ်ဆိုခြင်းဟာ ဘုရားရှင် ရဲ့ နှုတ်တော်က ထွက်လာတဲ့ ဓမ္မခန္မာတွေကို ပူဇော်တာဖြစ်လို့ ကုသိုလ်ရတာကို
လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မင်္ဂလသုတ်ကိုရွတ်ဆိုခြင်းထက် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ခြင်းကို ပိုပြီးသဘောကျပါတယ်။
ယခု စာရေးသူ တင်ပြသွားမည့်စာသားလေးက (မနုသီဟ) လူနှင့်ခြင်္သေ့နှစ်ခွ အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းအရာကို ရေးသားရခြင်းအကြောင်းက ဘုရားရှေ့ခြင်္သေ့အကြောင်းကိုရေးသား၍ ပို့တင်ပေးလိုက်သောအခါ pyae pho aung သည် (အရှင်ဘုရားကျေးဇူးတော်ကြီးမားလှပါတယ်ဘုရား ၊ မနုသီဟ အကြောင်းကိုလည်းသိလိုပါတယ်ဘုရား )ဟု ရေးသားပြီး
* ပြုမည်ကြံလဲ၊ သင့်စိတ်ထဲ၊ အမြဲ ဆင်ခြင်ပါ။
ပြုဆဲမှာလဲ၊ သင့်စိတ်ထဲ၊ အမြဲ ဆင်ခြင်ပါ။
မိမိ သူတစ်ပါး၊ နှစ်ဦးသား၊ ဘယ်သူများ ထိသလဲ။
ပြုပြီးပြန်လဲ၊ သင့်စိတ်ထဲ၊ အမြဲ ဆင်ခြင်ပါ။
ဆောင်ပေါ်တွင် သင်္ကန်းကို ခေါင်းမြီးခြုံ၍ အိပ်နေသော သူခိုးတစ်ယောက်ကို တွေ့မြင်၏။
ကုသိုလ်စိတ်တွေ များများဖြစ်စေရမယ်။ ဘာဖြစ်လို့ ကုသိုလ်စိတ်များများ ဖြစ်စေရမှာလဲဆိုရင်
အသံကို ဆွဲကာငင်ကာ တမင်သာယာအောင်လုပ်၍ တရားဟောရာ၌ အပြစ် ၅- ပါးကို
၁။ မိမိအသံကို မိမိပြန်၍ သာယာသော် တဏှာဖြစ်၏။
၂။ ကြားနာသူတို့မှာလည်း ထိုကဲ့သို့ တဏှာဖြစ်၏။
ဓမ္မစာဆိုတော်ကြီးများအနက် ကျေးဇူးများတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ တိပိဋကဓရဘွဲ့ရ ဆရာ
တော် ဦးဝိစိတ္တသာရ အရှင်မြတ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတော်ကြီးရဲ့ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာနဲ့ ဇွဲလုံလ
တို့မှာ အံ့သြချီးကျူးလို့ မကုန်အောင် များပြားလှပါတယ်။ အရေး၊ အဟော၊ အကျင့် သူမတူအောင်
စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ကျေးဇူးတော်ရှင် ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ဘာသာတရား ဆောင်ပုဒ်များ(၁၄)။
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 10:10 PM No comments:
လောကဓံ တရားနှင့် ကြုံလာရင်..
The mind that is not touched by the vicissitudes of life, the mind that is free from sorrow, stainless, and secure — this is the highest blessing.
လောကဓံ တရားနှင့် ကြုံလာရင် မတုန်မလှုပ်သီးခံ နိုင်တာ စိုးရိမ်ပူဆွေး သောက မဖြစ်တာ ကို မင်္ဂလာ အဖြစ် ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် ထုတ်ဖေါ် ဟောကြားထားခဲ့ပါတယ်။ လောကဓံတရား ရှစ်ပါးဆိုတာက လာဘ်ရခြင်း - လာဘ်ရခြင်း၊အခြွေအရံများခြင်း- အခြွေအရံနည်းခြင်း၊ ချီးမွမ်းခြင်း-ကဲ့ရဲ့ခြင်း၊ချမ်းသာခြင်း-ဒုက္ခဖြစ်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါတယ်။
“ပါဏာတိပါတကံ”ကို မလုံခြုံခဲ့ဘူးဆိုရင် လူ့ဘ၀ရောက်လာတဲ့အခါမှာ ချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်ပေ
၄။ အယူမှန် သမ္မာဒိဌိကို ရခြင်း။
စတ္တာရိ အရိယသစ္စာနိ၊ သမ္မပ္ပညာယ ပဿတိ။ ”
ကြီးမှာ ဘာသာ၊ သာသနာအတွက် ထူးထူးခြားခြား စွမ်းစွမ်းတမံ ဆောင်ရွက်လမ်းညွှန်သွားတဲ့
ကိုယ့်ဘယ်ကသား၊ သူကားသမီး၊ ချစ်ကျွမ်းနှီးက သာချည်းခေါင်ကောက်၊ သူ့လက်အောက်
- တစ်ယောက်မျှသာ ကျစေမည်။
- သူ့ဘက်ကသား၊ ကိုယ်ကားသမီး၊ချစ်ကျွမ်းနှီးသော်၊ သမီးကပါ၊ သွေးသားအားလုံး အတုံးအရုံးပင် သူ့အောက်ကခွင်၊ နွယ်ငင်စင်းလုံး ဆုံးတော့သည်။
- မျိုးခြား ရိုးခြား၊ ဘာသာခြားနှင့်၊ ထိမ်းမြားလက်ထပ် သတိုးဆက်သည့် ရစ်ပတ်စုလျား၊ ထိုပွဲများတွင် ဘက်မှားဆိုက်ဆိုက်၊ သူ့နောက်လိုက်က၊ ခိုက်မည့်ဆုံးရှုံး ကိန်းတွက်နှုန်းကို ပေါင်းရုံးတွက်ဆ၊ ခွဲတမ်းချလျှက်၊
- မကျခင်က၊ ကျမည့်အရာ၊ စဉ်းစားပါ။
အကြိမ်ကြိမ် ရောက်သည်။ သို့သော် အံ့ဖွယ် ၉ ပါး စုံအောင် တစ်ခါမှ မရောက်၊ ဘယ်နားမှာ ရှိမှန်း မသိတာလဲ ပါမည်။ ထိုအတွက်ကြောင့် အလွယ်တကူ မှတ်မိနိုင်စေရန် စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
အနုမာနဉာဏ်ကနေပြီးတော့ နောက် ပဋိဝေဓ
အဘိဓမ္မာမြတ်ဒေသနာ ဒုတိယတွဲ အပိုင်း(၅၄) အနုမာနဉာဏ်ကနေပြီးတော့ နောက် ပဋိဝေဓ ဆိုတဲ့ ကိုယ်တိုင် ထိုးထွင်းပြီးတော့ သိနိုင်တဲ့ အသိဉာဏ်မျိုးရအောင် အားထုတ်နိုင်ကြပါစေသတည်း
ဝိသုဒ္ဓိမဂ်မှာ ပြထားတဲ့ ဥပမာလေးတစ်ခုက ရေမြောင်းလေးတစ်ခုရဲ့ ဟိုဘက်ကို ခုန်ကူးချင်တဲ့သူဟာ ဒီဘက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ သစ်ပင်ကို ကြိုးလေးချည်ထားတယ်၊ သစ်ကိုင်းကို ကြိုးလေးနဲ့ ချည်ထားပြီး အဲဒီကြိုးလေးကို တွဲလောင်းခိုပြီးတော့ ဒီဘက်ကမ်းက ဟိုဘက်ကမ်းကို ခုန်တာ၊ ကြိုးဆွဲပြီးတော့ ဟိုဘက်ကမ်းကို ခုန်တာ၊ ဟိုဘက်ကမ်းလည်း အခြေချမိရော ကြိုးကို ကိုင်ထားသေးလား၊ လွှတ်လိုက်တာ။ ကိုင်ထားရင် ဒီဘက်ပြန်ရောက်လာမှာ ပေါ့နော်။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 11:43 AM No comments:
မြန်မာပည်တလွှားတွင်ဘုရားဖူးရသည်မှာ လွန်စွာကြည်နူးဝမ်းမြောက်ဖွယ်ကောင်းပါသည် သို့သော် ကြည်နူးရသည့်အခါထက် စိတ်ထိခိုက်ရသည့်အခါက ပိုများပါသည်။ တစ်ခုသော တစ်ထောင်ဘုရားများကို ဖူးမျှော်ကြည့်ရာ ဘုရားရုပ်ပွားဟူ၍ပင် မသိနိုင်တော့။ ဘာရုပ်တွေပါလိမ့်ဟု တွေးတောယူရသည်အထိ ပုံတွေကပျက်စီးနေသည်။ အမိုးအကာ မပါသဖြင့် မိုးရွာတော့စို၊ နေပူတော့ခြောက်နှင့် ရုပ်ပွားများမှာ မဲခြောက်ပြီး ပျက်စီးနေသည်။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 11:42 AM No comments:
ဓမ္မဒူတ အရှင်ဆေကိန္ဒ အလောင်းအလျာကို စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ စစ်ကိုင်းမြို့၊ သောတာပန်ရပ်ကွက် ခမည်းတော် ဦးအောင်သန်း+ မယ်တော် ဒေါ်စိန်ကြည်တို့က ကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၃၁၉-ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း (၉)ရက်၊ (28-1-1958) အင်္ဂါနေ့၌ မီးရှူးသန့်စင် ဖွားမြင်တော်မူခဲ့ပါသည်။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 12:32 PM No comments:
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 12:31 PM No comments:
ကုသိုလ် နှင့် အကုသိုလ် ပွားလာမှု
ကျွန်တော်တို့ ဓမ္မမိတ်ဆွေများအကြား အငြင်းပွားလျက် မဆုံးဖြတ်နိုင်သော ပြဿနာတစ်ရပ် ရှိနေပါသည်။
အချို့က ကုသိုလ်သည် ပြုလုပ်ပြီးသည့်နောက်တွင် ပြန်၍တွေးမိတိုင်း ကုသိုလ်စိတ်တွေတိုးကာ ပွားများလာသကဲ့သို့ အကုသိုလ်တွင် ပွားများသော အင်အားမရှိဟု ဆိုပါသည်။
အချို့က အကုသိုလ်ပြုပြီး နောင်တ(ကုက္ကုစ္စ)ရတိုင်း စိတ်နှလုံးပူလောင်ပြီး အကုသိုလ်စိတ်တွေ ပွားများလာသည်ဟု ဆိုပါသည်။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 12:30 PM No comments:
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 8:04 PM 1 comment:
ကျေးဇူးတော်ရှင် ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ဘာသာတရား ဆောင်ပုဒ်များ(၁၃)။
ဘယ်လှမ်း ညာလှမ်း၊ ဖြေးဖြေးလှမ်း၊ ခြေလှမ်းစိတ်ပါစေ။
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 7:51 PM No comments:
တရားနဲ့ထိန်းသွားနိုင်ရမယ်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရလာတဲ့ အကျိုးစီးပွားကိုလည်း “ဓမ္မယလဒ္ဓ”= တရားသ
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 7:36 PM No comments:
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 7:20 PM No comments:
မန်လည်ဆရာတော်ကို သာယာဝတီမင်းလက်ထက် စစ်ကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့နယ်
မန်လည်မြို့မှာ ၁၂၀၃ -ခုနှစ်၊ မွေးဖွားကြောင်း သိရပါတယ်။ မိဘနှစ်ပါးမှာ ဦးထင်ညိ+ဒေါ်ဖြေ
ဖြစ်ပြီးလူအမည်ကို မောင်မာလို့ ခေါ်ဆိုပါတယ်။ ရှင်ဘွဲ့နှင့် ရဟန်းဘွဲ့ကို ဇ၀နမထေရ်လို့ ခေါ်
ခန္တီဟူသည် သည်းခံခြင်း၊ အမျက်မထွက်ခြင်းဟု နားလည်ထားပါသည်။ သူတစ်ပါးတို့က မိမိအပေါ် ကာယကံ၊ ၀စီကံတို့ဖြင့် လွန်ကျူးလာသည်ကို အမျက်မထွက်ခြင်းသည် သည်းခံခြင်းဟု ဆိုလေရာ သူတော်ကောင်း တရားဖြစ်သဖြင့် လိုက်နာကျင့်သုံးထိုက်လှပေသည်။ သို့သော် လူမိုက်တစ်ယောက်၏ ဤသို့ကျူးလွန်လာမှုကို သည်းခံလိုက်လျှင် ထိုလူမိုက်က သူ့ကိုယ်သူ အမှန်ထင်သွားပြီး
**** သာသနာပြုသည် ဆိုရာဝယ် ****
ယနေ့ခေတ် မြန်မာနိုင်ငံ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်လောကတွင် အတွေ့ရအများဆုံး အသုံးပြုအများဆုံး ပေါ်ပြူလာအဖြစ်ဆုံး ဝေါဟာရစကားလုံးမှာ `သာသနာပြု´ ဆိုသည့်စကားလုံးပင်ဖြစ်ပါသည်။ယင်း`သာသနာပြု´ဆိုသည့်စကားလုံးကိုသံဃာတော်များလောကတွင်သာမကပဲ လူပုဂ္ဂိုလ်များလောက သီလရှင် ဆရာကြီး ဆရာလေးများလောကနှင့် နောက်ဆုံး ထေရ၀ါဒသာသနာတော်၏ ခလုပ်ဆူညှောင့်များဖြစ်ကြတဲ့ ဓါတ်ဆရာ, နတ်ဆရာ , ၀ိဇ္ဇာ,
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 8:46 PM No comments:
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 8:42 PM No comments:
၁။ ဘုရား၌ ရိုသေမှုရှိရမည်။
၂။ တရားတော်၌ ရိုသေမှုရှိရမည်။
၃။ သံဃာတော၊် ဆရာသမားနှင့် ထေရ်ကြီးများ၌ ရိုသေမှုရှိရမည်။
၄။ ကိုယ်ကျင့်သီလ၌ ရိုသေမှုရှိရမည်။
၅။ တည်ကြည်ခြင်း၌ ရိုသေမှုရှိရမည်။
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 8:31 PM No comments:
ဟာ သမာဝတီအပေါ် အမြဲအပြစ်ရှာတတ်တယ်။ သာမာဝတီကား မေတ္တာတရား အထူးပွားမှား
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 8:29 PM No comments:
မဟာဇနကမင်းကြီး၏ ထူးဆန်းနေသော တောထွက်ပုံ။
သွက်လက်ချက်ချာပုံ ရတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် သူ့ဆန်ကောထဲမှာ သဲတွေကိုထည့်ပြီး
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 7:41 PM No comments:
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 6:13 AM No comments:
အရာရာ၌ ကံကိုချည်း စွဲလမ်းကြသူများ။